हतियार खोई भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेपछि बोल्यो विप्लवको पार्टी, दियो सबैलाई चकित पार्ने गरि यस्तो जवाफ ! – Enepali Samchar
March 10, 2021 adminLeaveaComment on हतियार खोई भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेपछि बोल्यो विप्लवको पार्टी, दियो सबैलाई चकित पार्ने गरि यस्तो जवाफ !
e nepaalismchaar/काठमाडौ ।गत शुक्रबार मात्रै शान्तीपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपाको हतियार खोई भन्ने प्रश्न सबैले उठाएपछि उक्त पार्टीले जवाफ फर्काएको छ ।
नेकपा विप्लव समूहले आफूहरुसँग कुनै हतियार नभएको दावी गरेको छ । सरकारसँग तीन बुँदे सहमतिका क्रममा हतियार व्यवस्थापनका कुरा कहीँकतै उल्लेख नभएपनि यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला सो पार्टीले आफूहरुसँग कुनै हतियार नरहेको दावी गरेको हो।
अर्को प्रसंगमा उनले आफूलाई पटक–पटक हिरासतमा राखिएपनि कुनै यातनाको अनुभव नभएको सुनाए । उनले भने, ‘मलाई त सम्मानपूर्वक व्यवहार गरियो । कतिपय कमरेडलाई टर्चर गरिएको कुरा आएको छ। बरु, अस्ति अदालतमा प्रहरीले धरपकड गरेको हो । सरकारसँग भएको सहमतिमै कार्यकर्ता छोड्ने र मुद्दा फिर्ता गने कुरा छ । तीन बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर तीनमा त्यो कुरा उल्लेख छ । त्यो तुरुन्तै हुन्छ ।’
कोरोना भाइरस: भारतले नेपाललाई दिएको खोप र अन्य खोपबारे थाहा पाउनै पर्ने यो जानकारी हरु
जनता र राजाको सहमति आवश्यक भएको पूर्वराजाको सन्देश (विज्ञप्ति सहित)